आजको राशिफल / वि.सं २०७५ चैत्र २९ गते शुक्रबार - Purbeli News
आजको राशिफल / वि.सं २०७५ चैत्र २९ गते शुक्रबार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५ समय: ५:४६:४७
वि.सं. २०७५ चैत्र २९ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अप्रिल १२ तारिख, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आर्द्रा नक्षत्र, मिथुन राशिको चन्द्रमा, अतिगण्ड योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण, आजको चाडपर्व र उत्सव : वासन्ती नवरात्रीअन्तर्गत श्री कालरात्री भगवतीको पूजा गर्ने दिन, अष्टमी व्रत, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), कलशचक्र, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : गोरखकाली पूजा, चैत्राष्टमी, चैते दशैं, रामनवमी व्रत, राम जयन्ती, रामयात्रा, वासन्ती नवरात्रीअन्तर्गत श्री महागौरी र सिद्धीदात्री भगवतीको पूजा गर्ने दिन, भवानीको उत्पत्ति, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, भक्तपुरमा विश्वध्वजोत्थान, अशोकको पाउला खाने दिन, जमयाँत, भोलिको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र,
राहु काल : दिउँसो १०:३१ देखि १२:०६ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो ०३:१६ देखि ०४:५१ सम्म, गुलिक काल : बिहान ०७:२० देखि ०८:५५ सम्म, रोग वारवेला : दिउँसो ०१:४१ देखि ०३:१६ सम्म
शुभ वारवेला : दिउँसो १२:०६ देखि ०१:४१ सम्म, अमृत वारवेला : बिहान ०८:५५ देखि १०:३१ सम्म, भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) र वायव्य (उत्तरपश्चिम) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने पानी खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
परिश्रमका बलमा पराक्रम र प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने दिन छ । आज बोलीको विपरीत अर्थ लाग्नाले अप्ठ्यारामा पर्ने सम्भावना छ, मौन रहनु नै कल्याणकारी हुनेछ । तर जसअपजसको ख्याल नगरी काम गर्नुपर्छ, अन्त्यमा तपाईंकै श्रेय बढ्ने समय छ, मानसम्मान र प्रसिद्धि बढाउन सकिने दिन छ । यद्यपि सहयोगीहरूले साथ दिने अनुकूलता मिल्दैन, घरपरिवारभित्रै वा आफन्तबाट नै तपाईंको विश्वास नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ । ठूलाबडा, विद्वान् र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि साथ दिने छैनन् । यात्राबाट पनि सोचेजस्तो फाइदा लिन सकिंदैन, त्यसैले टाढाको यात्राको योजना छ भने नगर्नु राम्रो हो ।
लाभस्थानको चन्द्रमा निर्बल भएकाले समय त्यत्ति बलियो छैन तर कसैको पनि अपमान नगरेमा गरेका कामधन्दा र व्यवसायबाट बेफाइदा हुँदैन । कुनै पनि भिखारी, माग्ने वा याचकलाई सकेसम्म निराश तुल्याउनु हुँदैन । सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न थोरै बोलेको जाति हुन्छ । घरपरिवारमा सामान्य छ । हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि समय निकाल्न सकिंदैन । नियमित भोजनको अनुकूलता मिल्दैन् । अरुले तपार्इंका क्रियाकलापको चियोचर्चो गर्नेछन् । बोल्दा ख्याल गर्नुहोला, गतल सन्देश जानसक्छ । पापबुद्धि र भ्रष्टमतिको उदय हुनाले बढुवा वा जिम्मेवारीका अवसर गुम्न सक्छन्, सचेत रहनु बेस ।
अष्टम भावको चन्द्रमाका कारण बोलीको प्रतिकूल एवं विपरीत अर्थ लाग्ने हुँदा सचेतता एवं संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । चोटपटकको भय हुनेछ र बिनापत्ताको आरोप व्यहोर्नु पर्ने दिन छ । धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने तथा स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउने सम्भावना छ । विभिन्न समस्याहरू झेल्ने समय छ । घरपरिवारभित्र सानातिना समस्या देखिनसक्छन् । मानसिक तनाव र चिडचिडेपना बढ्न सक्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । पछाडि कुरा काट्नेहरूले षड्यन्त्रको तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन् । नजिकैको साथीले समेत कुरो बुझी दिदैंन् ।
शुभरङ्ग : गुलाबी वा सिन्दूरे, शुभअङ्क : ७, शुभदिशा : पश्चिम, इष्टदेवता : शिवर्पावती, अशुभ रङ्ग : पहेंलो, अशुभ अङ्क : २, अशुभ दिशा : दक्षिण, कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः, न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ के गर्ने : परिवारमा अधिकतम समय दिने, के नगर्ने : ख्यालठट्टा र जिस्क्याउने काम